Ngabe inja ekhanyisiwe ingaba nokushisa? | Izinja Umhlaba
Ngabe unayo inja futhi ungathanda ukwazi ukuthi, uma inenzalo, ingaba nokushisa? Kuyinto evamile, hhayi nje kuphela ngenxa yokuthi izinja zixhumana kanjani, ziletha impumulo yazo endaweni yangasese yomunye njengesibingelelo, kepha futhi ngoba kunokudideka okuningi phakathi kokuphaywayo nokungathathi hlangothi. Eqinisweni, kujwayelekile kakhulu ukusebenzisa igama elithi ukuthena ukukhuluma ngento efanayo, kanti empeleni kuyimisebenzi emibili ehluke kancane.
Ngokuya ngokuthi inja yakho ichithwe noma ayinamthelela, ungatshela ukuthi ingangena yini ekushiseni noma cha. Ngakho-ke uma ufuna ukwazi eminye imininingwane ngalo, uzothola ngezansi.
1 Kuyini ukuthena? Futhi inzalo?
1.1 Kuyini ukuthunyelwa?
1.2 Kuyini inzalo?
2 Isixazululo sokuthi inja yethu engathathi hlangothi iya ekushiseni
3 Ngakho-ke inja ekhonjiwe ingena yini ekushiseni?
Kuyini ukuthena? Futhi inzalo?
Okokuqala sizokhuluma nge- ukuthena. Le yinqubo yokuhlinzwa, ebizwa nge-ovariohysterectomy, ebandakanya ukukhipha isizalo kanye namaqanda. Ngalokhu Kuhloselwe ukuthi i-bitch ayinakuba nemidlwane, kepha futhi kungenzeka ukuthi iye ekushiseni isuswe ngokuphelele.
Isikhathi sangemva kokuhlinzwa sisekude, ngoba ukuhlinzeka kancane kuyabahlasela, kepha kwenziwa odokotela bezilwane cishe nsuku zonke. Kungumsebenzi ojwayelekile. Futhi izilwane ziyalulama ngemuva kwesonto (yize kusenesikhathi zizobuyela empilweni yazo ejwayelekile).
Kukhona futhi kungenzeka, noma kunjalo kuyaqabukela ngokwedlulele, ukuthi ukuthenwa akwenziwa ngendlela eyiyo futhi okusele kwezicubu kuma-ovari. Uma sibona ukuthi i-bitch yethu uma isithengelwe iya ekushiseni, kusho ukuthi kube nephutha ngenkathi kwenziwa lo msebenzi, kepha uma kukhona noma yisiphi isicubu esisele esisezilwaneni zamaqanda emzimbeni wesilwane, kuphela Izinsalela zezicubu zisaphila, ziyasebenza futhi kungalesi sizathu ukuthi lisekhona ikhono lokukhiqiza ama-hormone ocansi.
Lawa mahomoni akhona okufihliwe ngenxa yemfucumfucu yezicubu ezivela esibelethweni ezingasuswanga ngokuphelele, kuzobangela ukuthi inja yethu isakwazi ukufeza amandla ayo ajwayelekile okungena ekushiseni futhi lokhu kungenzeka noma ngabe womabili amaqanda esusiwe emzimbeni.
Singacabanga ukuthi izinsalela ezibalwe ngenhla zezicubu ezivela kuma-ovari empeleni akufanele zibe semzimbeni ngenxa yokusebenza, basaqhubeka nomsebenzi wabo oyinhloko, okungekho okunye ngaphandle kokufihla ama-hormone ocansi kanye nokugcina isimilo sokushisa sinyakaza ku-bitch yethu.
Nge inzaloEsikhundleni salokho, okwenziwayo kumane kuyisigaxa se-tubal. Lokhu kuvimbela isidoda, uma sizolingisa, ekufinyeleleni esibelethweni. Kuthatha isikhathi esincane kakhulu ukuthola kabusha (imvamisa cishe izinsuku ezi-3), ukuze ubuyele esimisweni sakho sansuku zonke kungekudala. Kepha ngalokhu kusebenza amathuba okungena ekushiseni awasuswa, ukuze kuthi lapho isikhathi sifika, abuyele ekuziphatheni kwakhe okujwayelekile (ukufuna umlingani, abe nothando kakhulu kunokujwayelekile, njll.)
Isixazululo sokuthi inja yethu engathathi hlangothi iya ekushiseni
Kufakazelwe ukuthi ngokuhlinzwa nangokususa ngokuphelele i- izicubu ze-ovari, ukwazile ukuxazulula le nkinga ezinjeni ezingasebenzi kahle. Lokhu kusho ukuthi ngamanye amagama, uma sinenkinga, kufanele siye kudokotela wezilwane ngokushesha.
Into yokuqala okufanele yenziwe ukuthi uchwepheshe angabheka uchungechunge lokuhlaziya ukuthi yisiphi isimo esihlobene nenja yethu, uma usenza ama-hormone ocansi noma ngomehluko wayo ayizivezi futhi zona kufanele zinikeze ukuxilongwa.
Uma isimo sesivele siqinisekisiwe, Isixazululo sale nkinga ukwenza inja futhi ukwazi ukususa ngokuphelele zonke izinsalela zezicubu zama-ovari okungenzeka ukuthi zahlala ngenxa yokusebenza kwangaphambilini.
Iqiniso ukuthi akubonisi nhlobo ubuchwepheshe bezilwane, uma inja kufanele ithenwe okwesibili. Imvamisa akuvamile ukwenzeka, kepha kunamacala lapho lezi zinhlobo zezinkinga zenzekile khona.
Ngakho-ke inja ekhonjiwe ingena yini ekushiseni?
Njengoba ngemuva kokuvala inzalo i-bitch izoqhubeka nokukhiqiza ama-hormone ocansi, njengoba amaqanda ayo ezoqhubeka nokuqina, impendulo inguyebo. Ngakho-ke, yize intengo iphakeme ngandlela thile (ukuthena ngokuvamile kubiza cishe ama-euro angama-150-200 eSpain, ngenkathi kuvalwa inzalo engaphezulu noma ngaphansi), sincoma ukuthi lesi silwane singathathwa. Ngale ndlela, ugwema ukuba nokushisa, ukungcola okungadingeki, nokungakwazi ukujabulela ukuhamba buthule nomngane wakho onoboya.
Ngakho-ke, sethemba ukuthi ufunde okuningi mayelana nokukhipha izinja nokufaka izinja.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Ngabe inja ekhanyisiwe ingaba nokushisa?